Amai Matibenga Vanoramba Kutaura neVashandi veHurumende Kana Vasina Kubatana
WASHINGTON — Hurukuro dzemihoro yevashandi vehurumende dzatarisana nedambudziko zvichitevera danho rakatorwa negurukota revashandi vehurumende, Amai Lucia Matibenga, rekunyorera masangano evashandi vachiazivisa kuti havasi kuzoita hurukuro navo kana vasati vagadzirisa matambudziko ari mumasangano aya.
Amai Matibenga vakanyorera sangano rinomirira masangano evashandi vehurumende, reApex Council, pamwe nerimwe sangano revashandi, rePublic Service Association, PSA, vachiti masangano maviri aya atange agadzirisana kuti ndiyani anomirira vashandi panhaurirano.
Apex Council yakatumira mazita evanhu vachamirira nhengo dzayo munhaurirano, ukuwo PSA ichitumirawo rimwe gwaro remazita, izvo zvinonzi naMai Matibenga zvigadziriswe kubude gwaro rimwe chete.
PSA yakaramba kupinda mumusangano wakasarudza hutungamiri hutsva hweApex Council huri kutungamirirwa naVaDavid Dzatsunga, mushure mekunge mamwe masangano aramba Amai Cecilia Alexander vePSA, avo vainge vadomwa nePSA semunhu aifanirwa kutora chigaro chasachigaro weApex Council.
VaDzatsunga vaudza Studio7 kuti havana ruzivo kuti musangano ravo mune makakatanwa ari kutaurwa negurukota ravo aya.
Asi munyori mukuru wePSA, VaEmmanuel Tichareva, vatenda kuti kune makakatanwa muApex Council ayo vati ari kugadziriswa kuitira kuti nhaurirano dzemihoro dzienderere mberi.
Vatiwo sangano ravo richiri nhengo yakazara yeApex Council, uye vachagara pasi kuti vabude negwaro remazita rimwe chete pasi peApex Council, ayo achaendeswa kugurukota ravo.
Gore rino hurumende yakangokwanisa chete kupa vashandi vayo mari dzekubatsirikana, sezvo iri kuti haina mari yekuwedzera mihoro yavo.
Vashandi vari kuda kuti munhu anotambira mari yepasi pasi atangire pamazana mashanu nemakumi matanhatu emadhora pamwedzi, kubva pamazana maviri nemakumi mapfumbamwe iri kutambirwa pari zvino.
Zvichakadaro, munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, VaRaymond Majongwe, vati kana musi wa 5 Gumiguru ukasvika pasina chafamba munyaya dzemihoro, nhengo dzavo dzichatora matanho ekuramwa mabasa munyika yose.